Jabuuti: Dekedda Dooraale waxay ku jiri doontaa gacanta Dawladda – Kasmo Newspaper
Jabuuti: Dekedda Dooraale waxay ku jiri doontaa gacanta Dawladda
Updated - March 15, 2018 12:49 pm GMT
London (Kasmo), Sarkaal ka tirsan Xukuumadda Jabuuti, Xasan Ciise Suldaan, ayaa Maraykanka u xaqiijiyay in maamulka Dekedda Dooraale ku jiri doono gacanta Dawladda Jabuuti, laguna wareejin dooni Shiinaha.
Dekedda oo 5 Km u jirta Caasimadda Jabuuti waxay ku dhowdahay Saldhigga Militariga Shiinaha ee dalkaas laga furay 3dii Agosto 2017kii.
Bishii Febraayo 2018 Xukuumadda Jabuuti ayaa jabisay kunturaaddii Shirkadda UAE ee DP World ee gacanta ku haynta Dooraale, taas oo ka dhalatay heshiis la’aanta muran soo jiitamayay ilaa sannadkii 2012kii.
Waxaa xigtay in ku-dhowaanshaha Saldhigga Shiinaha darteed, Maraykanku ka muujiyeen walaac ku aaddan suuragalnimada in Peking la wareegto maamulka Dekedda.
Munaasibad dhagaysi ah oo 7dii March ka dhacday Senate-ka Maraykanka, Jeneral Thomas Wald, Taliyaha Ciidammada USA ee Afrika ayaa soo xigtay in haddii Shiinaha lagu wareejiyo cawaaqib gurracan u yeelan karto sahayda ku socota Ciidanka Maraykanka.
Saldhigga ‘Camp Lemmonier’ oo dhismihiisu bilowday 2001dii waa fariisinka ugu weyn ee ciidammada Maraykanku ku leeyihiin Afrika, waxaa ku sugan in ka badan 4,000 oo askari, waana goobta ay ka soo kacaan ‘Drones-ka’ ka hawlgala duqaynta Al-Qacidada Yaman iyo Al-Shabaabka Soomaaliya.
Dooraale waxaa la furay 2009kii waxayna qaadi kartaa 1,6 Malyuun oo Tan sannadkiiba, heerkaas oo ayan waligeed gaarin Dp World, oo markii dambe heshiis kale oo muran ka taaganyahay hadda la gashay maamulka Somaliland.
Dhowr toddobaad ka dib markii la buriyay heshiiskii Dp World, Shirkadda maamusha Dooraale oo Dawladdu leedahay waxay heshiis la gashay ‘Pacific International Lines’ oo fadhigeedu yahay Singapore, si loo kordhiyo 3 meelood oo 1 meel badeecadaha Dekeddu maamusho.
Qadar oo ka qaybgashay Carbis Militari oo ka dhacay Sacuudi Carabiya
Suuriya: Qaxa iyo Barakaca dagaallada ka socda dalkaas
Faaqidaadda xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta
Xiisadda Khaliijka: Trump oo muddo u qabtay dalalkii Qadar go’doominta saaray